“အပျော်ဆုံးနေ့ ” အပိုင်း (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “အပျော်ဆုံးနေ့ ” အပိုင်း (၁)
“အပျော်ဆုံးနေ့ ” အပိုင်း (၁)
Posted by mandalarthu on Sep 13, 2011 in My Dear Diary | 8 comments
လူမှန်းသိတတ်သည့် အချိန်ကာလမှစ၍ ယနေ့ အချိန်အထိ ကျွန်မဘ၀တွင် “အပျော်ဆုံးနေ့ ” ဟူ၍ များများစားစားမရှိခဲ့ဖူးပါ။ ဘ၀ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထား၍ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အပတ်တကုတ်ကြိူးစားအားထုတ်ပြီး ထိုက် ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ထူးများဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ရသော (၁၀)တန်း စာမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့ရသည့်နေ့ လား။ ဟင့်အင်း။ ထိုနေ့ သည်လည်း ကျွန်မဘ၀တွင် “အပျော်ဆုံးနေ့ ” မဖြစ်ခဲ့ပါ။
တနေ့ တာလုံးအဆက်မပြတ် တဖွဲဖွဲရွာသွန်းနေခဲ့သော ရန်ကုန်မိုးများအောက် ထီးတလက်နှင့် အလုပ် ခွင်ဝင်ခွင့်ရာထူးစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကပ်မည့်အဆောက်အဦရှေ့စောင့်စားရင်း ရင်ခုန်မျှော်လင့်ခဲ့ရသော အောင် စာရင်းတွင် မိမိနာမည်ပါလာခဲ့သည့်နေ့ လား။? ? ?။ ဟင့်အင်း။ အဲဒီနေ့ လည်း “အပျော်ဆုံးနေ့ ” မဟုတ်ခဲ့ပါ။
ဘ၀တွင် အခါများစွာထားခဲ့ဖူးသော မျှော်လင့်ချက်ပေါင်းများစွာ ပြည့်ဝခဲ့သော နေ့ ပေါင်းများစွာ လား။ဟင့်အင်း။ ထိုနေ့ များသည်လည်း စိတ်အာရုံတွင် မှုန်ဝါးပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။ အမှတ်ထင်ထင် “အပျော် ဆုံးနေ့ ” ဟူ၍ ယနေ့ အထိ နှလုံးသားတွင် သိမ်းဆည်းထားစရာ မရှိခဲ့ဖူးတာတော့ အသေအချာပင်။
ဒါပေမယ့် ဤယနေ့ (၁၁-၉-၂၀၁၁)ရက်နေ့ သည် ကျွန်မဘ၀တွင် “အပျော်ဆုံးနေ့ ” ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်ဟု ၀န်ခံရမည့်နေ့ ပင်။ သိပ်ကို တိုတောင်းသော အချိန်ပိုင်းလေးပါဘဲ။ ထိုခဏတာ အချိန်ပိုင်းလေးသည် ပြန်တွေးမိတိုင်း စိတ်နှလုံးကြည်နူး ပီတိဖြစ်မိကာ ကုသိုလ်တရားများ အထပ်ထပ်ပွားမိသည်အထိပင်။
ဒီနေ့။ အပျော်ဆုံးနေ့ ။
ကျွန်မတို့မန္တလေးမြို့တွင် (၁၉-၈-၁၁) နေ့ မှစ၍ ရက်ဆက်နီးပါးရွာသွန်းခဲ့သောမိုးကြောင့် မြို့နယ်(၃)ခုတွင် ရေဘေးဒုက္ခခံနေရပါတယ်။ အောင်မြေသာစံမြို့ နယ်ရှိ ညောင်ကွဲရပ်ကွက်နှင့် ရပ်ကွက်အချို့ ၊ မဟာအောင်မြေမြို့ နယ်ရှိ ဒေါနခြံ၊ မာလကာခြံအတွင်းက ရပ်ကွက်တွေနဲ့ချမ်းအေးသာစံမြို့ နယ်အတွင်းက ရပ်ကွက် အချို့ မှာ ရေ၀င်နေတယ်။အိမ်ထောင်စု ထောင်နဲ့ ချီပြီး ရေဘေးဒုက္ခ ကြုံ တွေ့ နေရတယ်။
ညောင်ကွဲရပ်ကွက်ကရပ်ကွက်တွေမှာ အိမ်ခြေ (၁၀၀၀) ကျော် ရေÕမုပ်နေတယ်။ရေကကျဖို့မလွယ်ဘူး။စုပ်ထုတ်တာအပြင် အခြားမရှိဘူး။ ရေအိုင်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
မြို့ တော်စည်ပင်က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းတွေ ရေ၀င်တဲ့ ရပ်ကွက်အချို့ မှာ ရေစုပ်စက်တွေနဲ့ရေတွေ စုပ်ထုတ်ပေးနေတယ်။
ရပ်ကွက်တချို့ ကိုလည်း ရွေ့ ပြောင်းပေးပြီး ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်ပေးထားတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
(၂-၉-၁၁)ရက်ထုတ် မော်ဒန်သတင်းဂျာနယ်မှ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးသတင်းကို ဖတ်မိပြီး ကျွန်မ ကုသိုလ်တော်ဘုရားဝင်းအတွင်း ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကွပ်ကဲရေးရုံးကို သွားရောက်လေ့လာမှုတွေ ပြု လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာ အိမ်ထောင်စု (၁၃၅) စုနဲ့လူဦးရေ (၄၇၅) ဦးရှိပြီး (၂၆-၈-၁၁) ရက်နေ့ မှ ကစပြီးဒီစခန်းကို ဖွင့်လှစ်ပြီး ရေဘေးဒုက္ခသည်များကို ဘုရားဝင်းအတွင်းအပြင်ဘက်ပတ်လမ်းတွေမှာ နေရာချထားပေးခဲ့ပါတယ်။
စားစရာမရှိဘဲ ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ သနားစဖွယ်ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကို မြင်တွေ့ လိုက်ရတဲ့ခဏ စိတ် မကောင်းခြင်းကြီးစွာ ကျွန်မဖြစ်မိခဲ့ပါသည်။
ကျွန်မတို့ က စားစရာအပြည့်အစုံ၊ ၀တ်စရာ ဖြူနီဝါပြာ ကာလာဒီဇိုင်းစုံ စိတ်တိုင်းကျ ၀တ်ဆင်ပြီး နေစရာနေအိမ် မိုးလုံလေလုံနှင့် စိတ်အေးချမ်းသာစွာ မပူမပင်ရဘဲ နေထိုင်နေခိုက်မှာ ရေဘေး ဒုက္ခကြုံနေရရှာတဲ့သူတွေမှာတော့ ရေလွတ်တဲ့နေရာကို ပြောင်းရွေ့ ပြီး ယာယီတဲထိုးနေထိုင်နေရရှာတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ညောင်ကွဲရပ်ကွက်ဟာ ရေနစ်မြုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရေဘေးသင့်သူအများစုက တာဘောင်ရိုးပေါ်မှာ ယာယီ တဲထိုးနေထိုင်ကြရပါတယ်။
အဲသည်နောက် ဩဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့ မှာတော့ အများစုက မန္တလေးတောင်ခြေမှရှိတဲ့ ကုသိုလ်တော်ဘုရားနဲ့ပုသိမ်ကြီးမြို့ နယ် အောင်ချမ်းသာရွာမှာရှိတဲ့ ပညာပါရမီဘော်ဒါဆောင်မှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း(၂)ခုကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာပြီးတဲ့ ကျွန်မဟာ သံဓိဋ္ဌာန်တခုကို ချလိုက် ပါတယ်။
“ငါလဲ မြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို ငါတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီမယ်”လို့ ။
ငါလဲ မြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို ငါတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီမယ်”လို့ 
မန္တလာသူလေးကူညီခဲ့ပုံကို စောင့်ဖတ်ပြီး သာဓုခေါ်ပေးမယ်နော်..
တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ။ခုလိုမြင်ရတွေ့ ရတော့ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာကြီးပါလားနော်။
ဟုတ်ပဗျာ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်မိပါတယ်.. အဲလိုလူတွေများများရှိပါစေ… မန်းစည်ပင်ကလဲ လုပ်ပေးရှာသားပဲနော်
ဟုတ်ကဲ့ ဗျာ ဝမ်းမြောက်ပါတယ် သာဓုခေါ်ပါတယ်
အဲ့လို အကူအညီလိုနေသူတွေကို လှူရတာဟာ
တကယ် ကျေနပ် ပီတိဖြစ်စရာပါ
လှူနေစဉ်မှာကိုပဲ စိတ်ထဲက ဖြစ်နေတာမို့ပါ ..။။။။
အဲ့ဒီ မန္တလေးက ခုဖြစ်နေတဲ့ အရပ် .. ရေဝပ်တယ်ဆိုတာမှာ ရေထွက်ပေါက် ကျဉ်းနေလို့လား ရေလမ်းကြောင်း မရှိလို့လား
စဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဗျာ ကိုယ်တိုင်မရောက်ဖူးတော့လည်း စိတ်ကူးနဲ့ပဲ တွေးမိတာပါ
မြစ်က လျှံတာမဟုတ်ရင် ဒီရေကို မဝပ်အောင် ထုတ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတော့ ရှိမှာပဲလေ
နည်းလမ်းရှာကြည့်စေချင်ပါတယ် အကြံပေးတာပါ .. ခုစက်နဲ့စုပ်တယ်ဆိုတာကတော့
ဆီတော်တော်ကုန်မယ် .. နောက် ထပ်မိုးရွာရင် ထပ်ကုန်မယ်ပေါ့ဗျာ .. မြောင်းသွယ်ထားရင် အဆင်ပြေမလား တွေးမိတာပါ ..ဂေါ်ကားတွေငှားပြီးဖောက်ကြည့်ရင်ရောပေါ့.. များများကုန်လည်း ကုန်ပေါ့ဗျာ တစ်ခါပဲ ကုန်မှာမို့လေ ..း) အစိုးရကလည်း သိနေတာပဲဟာ .. .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုပြီး အဆင်ပြေတာကို ဖြစ်စေချင်တာပါ ..။ ဒုက္ခရောက်နေသူများ အဆင်ပြေပါစေ ဗျာ .. လှူတဲ့သူများလည်း အဆင်ပြေကြပါစေ ..
သာဓု သာဓု သာဓုပါ ခင်ဗျာ။
အလှူခံ ၊ အလှူရှင်များ-
အလှူခံ တွေရော လှူဒါန်းသူများပါ လောကီဝဋ်ဒုက္ခများမှသည်-
၀ဋ်သုံးပါး တို့မှ လွတ်မြောက်နိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေ။
Thanksalot to all frds for sharing yr.good ideas and wishes about this article.
Frd,Shwe Ein Si,I will post it today.Thanks for yr sharing and interest my deed.
Frd Barnay,Thanks for yr pray and compliment.Now,it is ok cos’ of the sunny days.
Bro.,Ko Soe ,thanks again for yr good wish for me and all .Yes,we should try to free from all sufferings in this life through insight meditation until we are alive.